Penelope Cruz Sawirro Qaawan & Muuqaal Muuqaal Galmo ah - Celebrities Qaawan | June 2021
miyuu krysten ritter qaawanaa
sawiro qaawan oo danica patrick ah
sawiro qaawan oo dhab ah Emma watson
sawiro qaawan oo lagdinta dumarka ah
kelly brook ayaa xaday sawiro qaawan
Penelope Cruz - June 2021
Penelope Cruz Sida Aan Hore Loo Arag
Penelope Cruz waa markhaati nool oo ah in digaagga Latino ay damac leeyihiin. Atariishadan Isbaanishka ah ayaa dooratay doorkeedii ugu horeeyay iyada oo 16 jir ah waxayna si joogto ah u kaceysay tan iyo markaas. Cruz celebrity caan ah maaha Jennifer Love Hewitt ama xiddig cusub Mila Kunis laakiin way ka sii jinsi badan tahay ka dibna xiddigaha filimka ugu caansan. Waxay door muuqda ku yeelatay dhowr filim. Penelope sidoo kale waxay ahayd atariishii ugu horeysay ee Isbaanish ah taariikhda inay hesho abaalmarinta akadeemiyadda. Sidoo kale Aktaraddii ugu horeysay ee Isbaanish ah ee heshaa xiddig ku socda socodka Hollywood ee caanka. Laakiin hadda iyadu way leedahay Anya Chalotra iyada oo lagu badalayo muuqaalkeeda iyo isku ekaanta.
Tiirarka Penelope Cruz ee Jannada ka soo degay
Dhamaan muuqaalada hamiga leh ee Penelope Cruz
Xitaa waxaad ku arki kartaa iyada oo jilicsan qaar ka mid ah goobahan caanka ah ee filimadooda iyada ah hal ilaahiyo Isbaanish ah oo damac leh. Waxaa jira sawiro badan oo damaca Cruz ka jira halkaas oo xitaa aan ku wareersanahay meesha aan ka bilaabayo. Sawiradii ugu dambeeyay ee damaca xun ayaa ah kuwa ay ku raaxeysato paparazzi intii ay ku dabaalaneysay kor u kaca iyada iyo ninkeeda iyo cunugeeda Corsica. Tani ma ahayn markii ugu horreysay ee iyada laga soo qabto xeebta sida Chloe Dykstra . Gabadheenna Isbaanishka ah waxay umuuqataa inay dhibaato ka haysato soo qabashada eeyaheeda huh ?? Wuxuu ku dhashay Penelope Cruz Sanchez bishii Abriil 28th 1974 waa jilaa Isbaanish ah iyo moodel. Waxaa saxeexay wakiil markay da'deedu ahayd 15 jir waxayna markii ugu horreysay ka soo muuqatay TV-ga iyadoo 16 jir ah. Cruz wuxuu kaloo matalay Mango, L'Oreal iyo Ralph Lauren.
Penelope sidoo kale wuxuu damac ka galay filimada. Tani waa waxa dhacaya markaad qurxoon tahay oo aad ogtahay in dhagaystayaashaadu aysan xamili karin galmadaas oo dhan. Si loo hubiyo inay ku qanacday nin walba dhiciskeeda waxay iyaduna qaadatay dhowr sawir oo sawir qaali ah. Aad ayey u xun tahay iyada oo waligeed damac ku tagin sawirada-sawirada laakiin xaqiiqdii waxay ka tagtaa tiro rag ah oo leh lafdhabar. Jadwalka Tusmada
1. Penelope Cruz Sida Aan Hore Loo Arag
2. Penelope Cruz Titties Oo Samada Ka Soo Degay
3. Dhamaan muuqaalada damaca leh ee Penelope Cruz